कसरी र हालतमा जो घरमा पुरानो गलसुआशोथ को उपचार छ?
उपचार पुरानो गलसुआशोथ को घर मा एकदम सजिलै बाहिर। यसबाहेक, कुनै ठूलो नगद लगी आत्म-हेरविचार लागि आवश्यक छ। आखिर, पीडा र दुखेको घाँटी को छुटकारा प्राप्त गर्न, तपाईंले मात्र सरल र सजिला उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ।
पुरानो गलसुआशोथ को उपचार घरमा
वैकल्पिक चिकित्सा समस्या को लक्षण हटाइ धेरै प्रभावकारी छन् भनेर विधिहरू को एक विशाल संख्या समावेश छ। तिनीहरूलाई को सबै भन्दा राम्रो चयन गर्न, केही सरल व्यञ्जनहरु विस्तार जाँच्न।
घरमा पुरानो गलसुआशोथ को उपचार प्रतिनिधित्व गर्ने बिरुवाहरु को मद्दतले विरामीहरु बीचमा ठूलो लोकप्रियता उठाउँछ। यी सबै fleshy पात पछि inflamed गलसुए को उपचार को लागि आवश्यक हो कि विरोधी भडकाऊ गुण छ। उपचार राम्रो भयो कि, मुसब्बर वेरा को एक पेस्ट ताजा कागती मह, र त्यसपछि कोट ठूलो उत्पन्न घाँटी सम्पूर्ण श्लेम लाग्एको झिल्ली थप्न सक्नुहुन्छ।
यो उत्पादन को निको गुण सबैलाई ज्ञात छन्। प्रतिनिधित्व मह संघटक प्रयोग पुरानो गलसुआशोथ घर उपचार निम्नानुसार बाहिर गर्नुपर्छ: आवश्यक बिरुवा टुक्रा भाषा भाग अन्तर्गत यो राख्दै बाक्लो छैन परिपत्र प्लेट गर्छन, र त्यसपछि र बिस्तारै भंग। खैर, अधिकांश मानिसहरू सबै रात मुखमा यस्तो उत्पादन छोड्नुहोस्।
पुरानो गलसुआशोथ को उपचार को तरिका विचार, निवारक भौतिक चिकित्सा हाइलाइट गर्नुपर्छ। यसलाई सही पूरा गर्न, यो घाँटी को अगाडि अलिकति पनि चिउँडो उठाने बेला छाती को निर्देशन मा चिबुक आफ्नो औंलाहरु मालिश राम्रो छ लिन्छ।
प्रतिरक्षा प्रणाली बढावा र कम गर्न गलसुए को सुनिंनु, तपाईं धेरै स्वादिष्ट र स्वस्थ डेयरी पेय पकाउन गर्न सक्नुहुन्छ। यो, 190 एमएल दही लिन सिरप नितम्ब एक ठूलो चम्चा थप्न र त्यसपछि देखि साढे कागति को रस, ताजा चुकंदर (दुई साना spoonfuls संख्या मा) खन्याउन आवश्यक छ। कि पछि सबै उत्पादनहरु मिश्रित र प्रयोग एक दिन दुई पटक दुई ठूलो चमचा लागि रकम प्राप्त गर्नुपर्छ।
पुरानो गलसुआशोथ को उपचार को लागि दबाइहरु
एक निम्न विशेष तरिका समावेश जो पछिल्लो रूढिवादी चिकित्सा, निर्दिष्ट सक्छ एक विशेषज्ञ यस्तो समस्या रूपान्तरण गर्न पछि।
गलसुए को लुगा धुने र purulent प्लग हटाउने।
स्थानीय सूक्ष्मजीवीरोधी एजेन्टहरु को आवेदन (जस्तै, "Bioparox" तैयारी)।
उपचार, बरु समाधान disinfecting नियमित rinsing।
एंटीबायोटिक उपचार को प्रयोग, तर रोगी एक कमजोरीको वशमा पऱ्यौं छ भने मात्र।
को आवेदन क्वांटम चिकित्सा उपकरण "Rikta"।
गलसुए (जस्तै, UHF, माइक्रोवेव, पराबैंगनी irradiation, phonophoresis, आदि) त्यो को नरम Tissues मा microcirculation को महत्वपूर्ण सुधार को लागि भौतिक चिकित्सा मात्र छूट मा प्रयोग गरिन्छ।
चिकित्सा समाधान संग Inhaled घटनाहरू।
घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने pastes प्रयोग गलसुए भर्नु। यो प्रक्रिया एक डिस्पोजेबल सिरिंज र कैथिटर प्रयोग, (गहिरो) balsamic जेल lacunar च्यानलहरू शुरू द्वारा गरिन्छ। सामान्यतया, उपचार को यस्तो पाठ्यक्रम 11-12 सत्र (दैनिक प्रस्ताव) हुन्छन्।
कान मा हल्ला कसरी व्यवहार गर्ने?
को sciatic स्नायु को pinching को उपचार
बाँझोपन मा Borovaya गर्भाशय - एक सुरक्षित र प्रभावकारी हर्बल औषधी!
Microcytosis - यो के हो? जो रोगहरु microcytosis अवलोकन गर्न सकिन्छ?
को मृगौला उपचार र नतिजा मा Staghorn पत्थर
Makaryev विहार: त्यहाँ कसरी प्राप्त गर्ने? इतिहास, वर्णन, वास्तुकला
Sander "Makita 9,911": वर्णन, विनिर्देशों, समीक्षा
UGG जूता बिक्री
टमाटरहरूबाट सर्दका लागि एपटिस्टिस्टहरू: घोडाकुमारीको साथ व्यंजनहरू, मरिच संग कर्करहरू
कर मुक्त - यो के हो? कसरी जारी गर्न र यसलाई प्राप्त?
FAO: संक्षिप्त विवरण को व्याख्या
आर्बिट्राज सट्टेबाजी। bookmakers प्लग
सचिव चरा वा zmeed?
जेन बौद्ध र यसको दर्शन
प्रत्यक्ष पोशाक र यसको सुविधाहरू